Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny faha-25 taona nijoroan’ny ECCOVA izany ka ny tanjona dia ny hahafahana mamoaka ireo olona tena manan-talenta eo amin’ny asa famoronana lamaody mba tsy ho latsa-danja amin’ny any ivelany isika. Efa afaka manoratra anarana sahady eny amin’ny Eccova ireo vonona ny handray anjara amin’izany raha ny fantatra. Amin’ny 28 jona ho avy izao fotoana hanatanterahana ny ivon’ny fankalazana no hanolorana ny loka ho an’ireo izay mendrika indrindra amin’izany. Tsangambaton’ity faha-25 taona ity kosa moa ny fanokafana ny Eccova Ambatondrazaka sy ny ivon-toerana fanampiny iray ao Toamasina. Ny 15 sy ny 16 mey ho avy izao kosa no hanatanterahana ny fanadinam-panjakana ho an’ireo mpianatra andiany manaraka hafa.